Usosayensi onokushayisana kwezintshisekelo ezihola iLancet COVID-19 ithimba lomsebenzi wekhomishini ngemvelaphi yamagciwane - Ilungelo Lokwazi i-US
Usosayensi onokushayisana kwezintshisekelo ezihola iLancet COVID-19 i-task force emsukeni wegciwane
Posted on November 24, 2020 by USainath Suryanarayanan
Evikini eledlule, I-US Right to Know ibike ukuthi isitatimende esinomthelela ku-The Lancet esisayinwe ososayensi abaqavile bezempilo yomphakathi abangama-27 ngemvelaphi yeSARS-CoV-2 sihlelwe ngabasebenzi be-EcoHealth Alliance, iqembu elingenzi nzuzo elithole izigidi zamadola oxhaso lwabakhokhi bentela base-US lokusebenzisa ama-coronaviruses ngokwezakhi zofuzo nososayensi e-Wuhan Institute of Virology (WIV).
The Isitatimende sikaFebhuwari 18 wagxeka "imibono yetulo" ephakamisa ukuthi i-COVID-19 kungenzeka ukuthi yavela ebhodini, futhi wathi ososayensi "baphetha ngokumangazayo" leli gciwane livela ezilwaneni zasendle. Ama-imeyili atholwe yi-USRTK uveze ukuthi uMengameli we-EcoHealth Alliance uPeter Daszak wayibhala le ncwadi wayihlelela ukuthi "kugwemeke ukuvela kwesitatimende sezombusazwe."
ILancet yehlulekile ukudalula ukuthi abanye abasayine lesi sitatimende banezikhundla ne-EcoHealth Alliance, enesandla kwezezimali ekuphambukiseni imibuzo kude nokuthi kungenzeka ukuthi leli gciwane livele ebhodini.
Manje, iLancet ihambisa ithonya elingaphezulu eqenjini elinokushayisana kwezintshisakalo embuzweni obalulekile wezempilo yomphakathi ngemvelaphi yobhadane. NgoNovemba 23, iThe Lancet yaqamba igama elithi a iphaneli entsha yamalungu ayi-12 kuKhomishini yeLancet COVID 19. Usihlalo wethimba elisha lokuphenya i- “Origins, Early Spread of the Pandemic, kanye ne-One Health Solutions to Future Pandemic Usongo” akekho omunye ngaphandle kukaPeter Daszak we-EcoHealth Alliance.
Ingxenye yamalungu eqembu - kubalwa iDaszak, Hume Field, Gerald Keusch, Sai Kit Lam, Stanley Perlman noLinda Saif - nabo bangabasayina esitatimendeni sikaFebhuwari 18 abathi bazi umsuka waleli gciwane cishe ngemuva kwesonto ngemuva kweWorld Health. Inhlangano imemezele ukuthi lesi sifo esidalwe yi-coronavirus yenoveli sizobizwa nge-COVID-19.
Ngamanye amagama, okungenani isigamu seKhomishini ye-Lancet ye-COVID Commission ngemvelaphi yeSARS-CoV-2 kubonakala sengathi seyihlulele lo mphumela ngaphambi kokuthi kuqale uphenyo. Lokhu kwehlisa ukwethembeka negunya leqembu.
Imvelaphi ye-SARS-CoV-2 yile kuseyimfihlakalo futhi uphenyo olunzulu noluthembekile kungenzeka lubaluleke kakhulu ekunqandeni ubhadane olulandelayo. Umphakathi ufanele uphenyo olungangcoliswanga yizingxabano zentshisekelo ezinjalo.
Ukuvuselelwa (Novemba 25, 2020): UPeter Daszak naye uqokelwe esikhundleni se- Ithimba labantu abayishumi le-World Health Organisation ngicwaninga ngemvelaphi yeSARS-CoV-2.
Ama-Biohazards, IBiohazards Blog Umanyano we-EcoHealth, UGerald Keusch, Inkambu yeHume, ULinda Saif, imvelaphi ye-coronavirus, UPeter Daszak, I-Sai Kit Lam, SARS selwe-2, UStanley Perlman, I-Lancet, Ikhomishini ye-Lancet ye-COVID
IBiohazards News Tracker: Izindatshana ezihamba phambili ngemvelaphi yakwaSARS-CoV-2, ama-biolabs kanye nocwaningo lomsebenzi
IBiohazards Blog: I-USRTK icela i-ODNI ukuthi idalule imibhalo ngezingozi ezenzeka emalabhoratri ezigcina amagciwane ayingozi
Amasethi wedatha aguquliwe aphakamisa imibuzo eminingi ngokuthembeka kwezifundo ezibalulekile kwimvelaphi ye-coronavirus
Akukho ukubuyekezwa kontanga kwesengezo esifundweni esivelele semvelaphi ye-coronavirus?
Thola Ukubuyekezwa Kwelungelo Lokwazi
Bhalisela incwadi yethu yezindaba yokuqhamuka kwezindaba ezivela ophenyweni lweLungelo Lokwazi, intatheli yezempilo yomphakathi ehamba phambili kanye nezinye izindaba zempilo yethu.